Silicon ntekwasa faiba glaasi Fabric Manufacturers & Suppliers - China Silicon ntekwasa faiba glaasi Fabric Factory
Black faiba glaasi Cloth bụ a faiba glaasi ákwà, nke nwere Njirimara nke okpomọkụ na-eguzogide, mgbochi corrosion, elu ike na na-ntekwasa na organic silicone roba.
0.4mm Silicon ntekwasa faiba glaasi Cloth na-wuru site faiba glaasi isi ákwà na impregnated ma ọ bụ ntekwasa otu akụkụ ma ọ bụ abụọ na a akpan mejupụtara silicone roba. N'ihi silicone roba physiological inert, ọ bụghị nanị na-amụba ike, thermal mkpuchi, fireproof, egbochi ihe Njirimara, ma na-nwere ozone-eguzogide, oxygen ịka nká, ìhè ịka nká, ihu igwe ịka nká, mmanụ na-eguzogide na ndị ọzọ Njirimara
Akwa okpomọkụ faiba glaasi Cloth bụ faiba glaasi ákwà, nke nwere Njirimara nke okpomọkụ na-eguzogide, mgbochi corrosion, elu ike na-ntekwasa na organic silicone roba. Ọ bụ ngwaahịa emere ọhụụ emere nwere nnukwu njirimara yana ọtụtụ ngwa. Ruru ya pụrụ iche na magburu onwe iguzogide elu-okpomọkụ, permeability na ịka nká, na mgbakwunye na ya anwụ ngwa ngwa, a faiba glaasi ákwà na ọtụtụ-eji aerospace, chemical ụlọ ọrụ, nnukwu-ọnụ ọgụgụ n'ịwa ọkụ eletriki, ígwè, nkà mmụta banyere ígwè, metmeturgy, nonmetal mgbasa nkwonkwo (compensator ) na wdg.
Faiba glaasi Cloth N'ihi Sale
Faiba glaasi Cloth N'ihi Sale ka nke faiba glaasi isi ákwà na elu àgwà pụrụ iche silicone mkpuchi.Working okpomọkụ: -70 ℃ --- 280 I .Ọ nwere ike ji mee ihe dị ka eletriki mkpuchi ihe. Ndị na-abụghị nke igwe na-akwụ ụgwọ ya enwere ike iji ya dị ka njikọ maka tubing ma ọ nwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na mmanụ ala, injinia kemịkal, ciment na mpaghara ike. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji egbochi corrosion, ihe nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Plain Wave Faiba glaasi Cloth
Plain Wave Faiba glaasi Cloth ka nke faiba glaasi isi akwa na elu mma pụrụ iche silicone mkpuchi.Working okpomọkụ: -70 ℃ --- 280 I .Ọ nwere ike ji mee ka eletriki mkpuchi ihe. Ndị na-abụghị nke igwe na-akwụ ụgwọ ya enwere ike iji ya dị ka njikọ maka tubing ma ọ nwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na mmanụ ala, injinia kemịkal, ciment na mpaghara ike. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji egbochi corrosion, ihe nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Acha Faiba glaasi Cloth
Acha Faiba glaasi Cloth ka nke faiba glaasi isi akwa na elu mma pụrụ iche silicone mkpuchi.Working okpomọkụ: -70 ℃ --- 280 I .Ọ nwere ike ji mee ka eletriki mkpuchi ihe. Ndị na-abụghị nke igwe na-akwụ ụgwọ ya enwere ike iji ya dị ka njikọ maka tubing ma ọ nwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na mmanụ ala, injinia kemịkal, ciment na mpaghara ike. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji egbochi corrosion, ihe nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Faiba glaasi Cloth Suppliers
Faiba glaasi Cloth Suppliers ka nke faiba glaasi isi ákwà na elu àgwà pụrụ iche na silicone mkpuchi.Working okpomọkụ: -70 ℃ --- 280 I .Ọ nwere ike ji mee dị ka eletriki mkpuchi ihe. Ndị na-abụghị nke igwe na-akwụ ụgwọ ya enwere ike iji ya dị ka njikọ maka tubing ma ọ nwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na mmanụ ala, injinia kemịkal, ciment na mpaghara ike. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji egbochi corrosion, ihe nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Faiba glaasi Uwe
Faiba glaasi Uwe N'ihi Waterproofing ka nke faiba glaasi isi akwa na elu mma pụrụ iche silicone mkpuchi.Working okpomọkụ: -70 ℃ --- 280 I .Ọ nwere ike ji mee ihe dị ka eletriki mkpuchi ihe. Ndị na-abụghị nke igwe na-akwụ ụgwọ ya enwere ike iji ya dị ka njikọ maka tubing ma ọ nwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na mmanụ ala, injinia kemịkal, ciment na mpaghara ike. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji egbochi corrosion, ihe nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Glass Fiber Cloth N'ihi Waterproofing
Glass Fiber Cloth N'ihi Waterproofing ka nke faiba glaasi isi ákwà na elu àgwà pụrụ iche na silicone mkpuchi.Working okpomọkụ: -70 ℃ --- 280 I .Ọ nwere ike ji mee dị ka eletriki mkpuchi ihe. Ndị na-abụghị nke igwe na-akwụ ụgwọ ya enwere ike iji ya dị ka njikọ maka tubing ma ọ nwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na mmanụ ala, injinia kemịkal, ciment na mpaghara ike. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji egbochi corrosion, ihe nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Uwe faiba glaasi, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Acryli faiba glaasi Cloth, Aluminized faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric,